Privacy: Firefox ဖြင့်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန် Plugins | Linux မှ
သီးသန့်လုံခြုံရေး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဖြည့်စွက်ငွေစုရရှိနိုင်ပါသည် Mozilla Firefox ကို ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်aထက် ပို၍ လုံခြုံစေရန်ကူညီလိမ့်မည် Zaragoza အတွက် Locksmith 😀
ဤစုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောချဲ့ထွင်မှုများတွင် - Adblock Plus၊ NoScript၊ WOT၊ FoxyProxy၊ DuckDuckGo Plus၊ သီးသန့်တဘ်, အခြားအတော်လေးကျော်ကြား extension များအကြား။
ထိုတိုက်ဆိုင်မှုသည်ယနေ့ဖြစ်ပါသည် ဒေတာကာကွယ်မှုနေ့သင်သိပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသောပညာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ \_ t Mozilla က ပစ္စုပ္ပန်။
…မိုဇီလာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းရှိသမျှကိုလုပ်နေပြီးဝက်ဘ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ပြုကြသည် အလင်းရောင် နှင့်အင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့ ငါခြေရာခံခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး။ ပွင့်လင်းပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ပြုကြသည် Firefox ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းမှအတည်ပြုနိုင်သောဘရောင်ဇာတစ်ခုသည်မရိုးမသားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေပြုသူများနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအားဥပဒေရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အားပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အားပေးခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အတွက်ဒီနေ့အကြောင်းကိုပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များ Mozilla ဘလော့ဂ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Privacy - သင်၏ privacy ကို Firefox ဖြင့်ကာကွယ်ရန် Plugins များ
မင်္ဂလာပါ၊ အဲဗ်လ၊ ကျွန်တော်အဓိကအကြောင်းအရာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊
ငါမသိသောအတော်လေးစပ်စုများနှင့်အသုံးဝင်သော plugins ကိုရှိပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါ AdblockPlus နှင့် Gostery မှာပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာမှတ်မိပါက Gostery သည်ကြော်ငြာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီမှဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Do Not Track Me၊ HTTPS Everywhere နှင့် AdBlock Edge (AdBlock Plus ၏ fork တစ်ခုဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်အမှားမခံရပါက၊ ကြော်ငြာရှင်များကငွေပေးလျှင်ကြော်ငြာအချို့သည်သွားခွင့်ပြုသည်။ Firefox မှ cookies များကိုကျွန်ုပ်ဖျက်နိူင်ပြီး၎င်းအတွက် plugin မလိုအပ်ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ privacy ကိုအလေးအနက်ထားခြင်းအတွက် Firefox သို့ bravo!
ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို
NoScript လုံခြုံရေး Suite
Ghostery (clow_eriol ၏အဆွေခင်ပွန်း၏ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ အချက်အလက်ပို့ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်ထားပြီးပါပြီ၊ မည်သည့်အချက်အလက်ကပိုကောင်းသည်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်)
HTTPS Everywhere ကို
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ငါ ghostery ကိုသုံးပြီးသူတို့အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာကိုစွန့်ပစ်လိုက်တယ်။
Family Farm: လယ်ယာ၊ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ Linux အတွက်လယ်သမားများဂိမ်း